Ogaden News Agency (ONA) – Laynta shacabka iyo Haweenka geesnimo iyo ragannimo toona ma’aha – Nuura Afgaab
Laynta shacabka iyo Haweenka geesnimo iyo ragannimo toona ma’aha – Nuura Afgaab
Sixitaan : Ninkan waa madaxa Sirdoonka ee ma’aha Madaxa Xafiiska Nabadgalyada .. waana Afhayeenka Liyu Booliska. Magaciisana waxaa la yidhaahdaa Muqtar Sh. Maxamad Subane.
Xafiiska Nabadgalyada Qaybta Jigjiga.
Waxaa aad u soo badanaya maalmahan laynta dadkii shacabka ahaa ee magaalooyinka iyo tuulooyinka daganaa, arintaana waxaa hadda dardarteeda wada ninka loo dhiibay masuuliyadda waxay ku tilmaameen nabadda oo ah meeshii uu Cabdi iley ka soo fuulay masuuliyadda. Dad arimaha kooxda Cabdi iley uu la tashado oo qoyska u badan wax kala socda ayaa noo sheegay inuu arimaha dilka iyo xadhiga ah ee sida aadka ah uga socda hadda magaalada iyo miyigaba ka dambeeyo ninkan loo magacaabay booskii uu haysan jiray Cabdi iley, taasoo ay ku sheegeen inuu ka leeyahay ujeedo ay ka mid tahay inuu Itobiya gaar ahaan saraakiisha sirdoonka ee jooga gobolka uu ugu muujiyo inuu noqon karo badalka Cabdi Iley hadii loo baahdo in la badalo. Waa nasiibdarro in dhiiga shacabka jago lagu doonto.
Dadka waxgaradka ah iyo odayaasha ayaa aad ula yaaban siyaabaha ay dhaqmayaan Cabdi iley iyo kooxda la socota oo xalaashaday dhiiga dumarka iyo dadka agtooda jooga een wax ay galabsadeen aan jirin. Taasi waxay muujinaysaa un fulaynimadooda iyo kartidaradooda, iyo in aanay waxba ka jirin beenta ay faafinayaan ee meel walba ay ka sheegaan in nabadiidkii la baabi’yay oo soo soo duubaan filimaan ay leeyihiin waa Cabdi Iley oo kolba meel tagaya. Hadday arintaasi jirto maxaa keenay inay isla bishan kumanaan qof soo xidhaan qaar kalena ay ku toogtaan magaalada badhtankeeda iyo tuulooyinka oo waliba haween ay ku jiraan. Dad badan oo raja ka qabay inuu Cabdi iley ka soo rayn doono ayaa hadda ogaaday inuu ninkan yahay mujrim aan laga rajaqabin inuu ka towbad keeno laynta shacabka.
ONLF ma jirto hadana xabsiyada ayay ka buuxaan dadkii shacabka ahaa oo maalinwalba ayaa la soo xidhayaa iyagoo lagu eedeynayo waa taageerayaal ama waxay biya siiyeen Nabdiidka ama waxaa sheegay mid iyaga ah oo soo xarooday wax isqaadanaya ma’aha. Waxaa jira warqada dacwad ah oo loo qoray dawladda dhexe oo arintaa lagaga hadlayo oo loo sheegayo siyaabaha macnadarada ah ee kooxdan maafiyada ah ay dadka shacabka u gumaadayaan si dawldda looga dhaadhiciyo inay u yihiin daacad. Hasa ahaatee dacwadahan la qoray ayaan wax raja ah laga qabin maadaama dawladda dhex ee Itobiya ka dib dhimashadii Mesles ay tahay mid aan awoodeeda dhaafsiisnayn dawladda hoose ee Adisababa iyo wasaaradaha.